Yini Oyaziyo Nge-Electric Drill
I-Electric drill ngumshini wokubhola osebenzisa ugesi njengamandla. Kungumkhiqizo ojwayelekile kumathuluzi wamandla nomkhiqizo wethuluzi lamandla odingeka kakhulu. Ukucaciswa okuyinhloko kokubholwa kukagesi kungu-4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, njll. Izinombolo zibhekise kububanzi obukhulu be ...
Ungayikhetha Kanjani Ingcindezi Yamanzi Engcindezi
Ngokwanda kobunikazi bezimoto, nentengo yokuwashwa kwezimoto nayo inyukile. Iningi labanikazi bezimoto abasebasha bashintshe imibono yabo bakhetha ukuwasha izimoto zasekhaya ezishibhile, ezisheshayo, ezikahle, nezingayilimazi imvelo. Lapho ugeza imoto ekhaya, kuyadingeka futhi ukuthi ube nemoto yokugeza amanzi gu ...
Umehluko phakathi kweLithium Drill 12V kanye ne-16.8V
Ama-drill kagesi asetshenziswa kaningi empilweni yethu yansuku zonke. Lapho sidinga ukubhola izimbobo noma ukufaka izikulufu ekhaya, sidinga ukusebenzisa izivivinyo zamandla. Kukhona futhi umehluko phakathi kokuzivivinya kwamandla. Okuvamile ngama-volts ayi-12 nama-volts ayi-16.8. Uyini-ke umehluko phakathi kwalokhu okubili? Yini umehluko ...
Ngo-Agasti 2020, inkampani yethu yathuthukisa izinhlobo ezintsha ze-lithium ……
Ngo-Agasti 2020, inkampani yethu yathuthukisa amamodeli amasha wamathuluzi wamandla webhethri e-lithium, izibhamu zamanzi zebhethri kanye ne-lithium battery garden trimmer, futhi yadlulisa isitifiketi se-GS, yavula indlela yokungena okulandelayo ezimakethe zase-Europe naseMelika. Imikhiqizo ihlanganisa i-12V edumile njengamanje ...